China NRC rubbering mkpuchi Manufacturers na Suppliers | Hongyuan
Ngwaahịa na-gbanwetụrụ bitumen waterproof mkpuchi mere si roba gbanwetụrụ bitumen na pụrụ iche nwekwara site pụrụ iche usoro. Ọ nwere ike na-etinyere na ndị ọzọ waterproof membranes na-etolite mejupụtara waterproof oyi akwa. Mgbe a na-eji dị ka otu nọọrọ onwe ha waterproof oyi akwa, ya n'elu ga-echebe site na mkpuchi oyi akwa. Product nlereanya na nkọwapụta (mgbanwe site si ewu ụlọ): spraying ụdị, sere ụdị, grouting na oru ụdị
● Self-reparation: ihe agaghị ikewapụ n'oge ewu, nke nwere ike na-etolite mụ na enweghị nkebi waterproof oyi akwa. Waterproof oyi akwa mebiri emebi na-ewu na ime ihe ga-onwe-rụziri iji gbochie mmiri si akụzi n'ime waterproof oyi akwa, na ịnọgide na-enwe continuity nke waterproof oyi akwa. ● adhesion: waterproof ihe onwunwe nwere ike gbasoro na isi N'ezie ọbụna mmiri iji hụ na ezi waterproof mmetụta mgbe bughi deformation emee. ● Leaching eguzogide: waterproof ihe onwunwe agaghị leach n'ihi nke ala mmiri flushing mgbe ewu.
● Chemical eguzogide: magburu onwe acid, alkali, na nnu na-eguzogide ọgwụ arụmọrụ;
● Easy ewu: ala chọrọ on isi N'ezie na free si pụrụ iche ọgwụgwọ na-ebelata-ewu oge, na-ewu na ala okpomọkụ na-ekwe;
● Easy mmezi na management
● High siri ike ọdịnaya, na ọ dịghị obodo ihe;
● Mgbe mee, na-abụghị na-egbu egbu, odorless, na mmetọ-free;
● The ngwaahịa nwere ike chekwaa ihe akara akpa maka a ogologo oge, na-enweghị na-emetụta ya ịrụ ọrụ.
ngwa Akporo NRC-abụghị solidify roba bitumen mkpuchi nwere ike etinyere dị ka waterproof ọgwụgwọ maka ụlọ ọhụrụ, ma ọ bụ ịrụzi mebiri emebi waterproof oyi akwa. Ọ bụ na ọdabara waterproofing nke nkịtị ebe, nakwa dị ka deformation nkwonkwo na ndị ọzọ pụrụ iche ọnọdụ. E jiri ya tụnyere ndị ọzọ waterproof ihe, o nwere ihe pụrụ iche uru na waterproof ọgwụgwọ maka pụrụ iche ọnọdụ.
● The ngwaahịa nwere ike ji mee na-etolite waterproof oyi akwa, ma ọ bụ na-ekwenye waterproof membranes ka waterproof gluu, ka na-etolite mejupụtara waterproof oyi akwa. ● Ọ nwere ezi nyagide mmetụta na ụdị nile nke waterproof membranes (gụnyere EPDM roba akpụkpọ ahụ, polyethylene polypropylene eriri waterproof akpụkpọ ahụ), nke nwere ike na-etolite mejupụtara waterproof oyi akwa. ● Ịgbaso ụkpụrụ na isi N'ezie na-etolite akpụkpọ dị ka waterproof oyi akwa iji gbochie channeling mmiri;
● Low chọrọ on isi N'ezie iru mmiri, na-ewu ụlọ nwere ike na-emejuputa atumatu-adịghị anya mgbe mmiri na isi N'ezie na-kpochara, ka ebelata ewu oge;
● dịgasịa usoro na-adaba adaba na-ewu: ngwaahịa nwere ike na-ese ma ọ bụ sprayed na-ewu.
● kasị pụta ìhè ala okpomọkụ constructability: ịgba ewu nwere ike na-emejuputa atumatu n'okpuru ala okpomọkụ ọnọdụ.
● High ime mgbanwe iji kwekọọ bughi deformation: ihe nwere pụtara ìhè extensibility na adhesion ka n'ụzọ zuru okè imeghari bughi deformation, na izere waterproof oyi akwa mmebi kpatara bughi deformation. Mgbe akpụ mejupụtara waterproof oyi akwa na membranes, NRC-abụghị solidify roba bitumen mkpuchi nwere ike banye niile deformation nchegbu na-emesi ogologo oge intactness nke ọtụtụ ihe mejupụtara waterproof oyi akwa.
Mejupụtara Construction na akpụkpọ ahụ (Ịgba)
Heating nke NRC Non-mee Rubber bitumen mkpuchi
Spraying nke NRC Non-mee Rubber bitumen mkpuchi
akpụkpọ ahụ Paving
Nka na ụzụ Performance Index
Executive Standard: Non-mee Rubber bitumen (NRC) mkpuchi (Q / 0783WHY003-2012)
Akọrọ Base ≥
Low okpomọkụ mgbanwe
-20 ° C, ọ dịghị fissure
-25 ° C, ọ dịghị fissure
Kwes Nguzogide / ° C
Ọ dịghị eji, eru ma ọ bụ na idobe
Kwes ịka nká 70 ° C × 168h
-15 ° C, ọ dịghị fissure
Ọ dịghị mgbanwe
Ọ dịghị akwụsị
Creep n'okpuru na-adọgbu adọgbu State / N / mm
Ọ dịghị channeling
Previous: abụọ akụrụngwa waterproof mkpuchi
Osote: High-agbanwe ọkpụrụkpụ acrylic eater waterproofing mkpuchi
Acryli Waterproof mkpuchi, Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ , Tpo Waterproof akpụkpọ, Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi , Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete ,
Tpo Waterproof akpụkpọ, Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ , Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi , Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete , Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Acryli Waterproof mkpuchi,